एमसीसी पारित हुन लागेको बिषयमा प्रचण्डले गरे यस्तो खुलासा, के हो रहस्य ? — Imandarmedia.com
एमसीसी पारित हुन लागेको बिषयमा प्रचण्डले गरे यस्तो खुलासा, के हो रहस्य ?
काठमाडौं । वर्तमान सरकारको एक प्रमुख साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले अमेरिकी सहयोग एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित नहुने बताएका छन् ।
हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम यक्ष प्रश्नसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले एमसीसीलाई नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकुल कति पारिमार्जन र संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने बताए । उनले एमसीसीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सामान्य कुराकानी भएपनि यसको परिमार्जन, संशोधन र ब्याख्या गर्ने विषयमा ठोस कुराकानी नभएको बताए ।
उनले गठबन्धन सरकारमा तत्कालै समस्या आउने आफूले नदेखेको पनि बताए । प्रचण्डले भने, ‘एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै मान्दैनौं भनेका छौं । एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन । यसमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र व्याख्या गरेर मात्र यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिने क्रममा एमालेका ३३ जना सांसदले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि आन्तरिक संकट झन् चुलिएको छ । पार्टीले तटस्थसमेत नबस्न ह्वीप जारी गरे पनि ११ सांसद अनुपस्थित भए पनि २२ जनाले देउवाको पक्षमा मतदान गरे ।
फागुन २९ मा ओली र नेपालको उपस्थितिमा दुवै पक्षका पदाधिकारीहरूबीच पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा वार्ता भयो । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेपछि सहमति हुन सकेन । ओली पक्षले निर्णय नसच्याउने अडान लिएपछि चैत ४ र ५ मा खनाल–नेपाल पक्षले दुईदिने राष्ट्रिय भेला गरेर देशैभर समानान्तर कमिटी बनाउने र ओलीविरुद्ध राजनीतिक संघर्ष कायम राख्ने निर्णय गर्‍यो । चैत १० मा ओली समूहको बैठकले नेपाल, रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पार्टी हितविरोधी गतिविधि गरेर अनुशासन तोडेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो ।
एमाले विवाद तब उत्कर्षमा पुग्यो, जब संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले त्यसैअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । राष्ट्रपतिले आह्वान गरेअनुसार जेठ ७ मा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खनाल–नेपाल समूहका २६ सहित १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर विपक्षी गठनबन्धनका नेता शीतल निवास पुगे । त्यही राति वैकल्पिक सरकार गठन हुने दुवै पक्षको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले वक्तव्य जारी गरिन् । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनको सिफारिस गर्‍यो ।
जेठ १० मा बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने खनाल–नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसबीचमा पनि कार्यदलमा रहेका दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच लगातार अनौपचारिक संवाद जारी थियो । उनीहरूको प्रयत्नपछि जेठ २३ मा ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे आह्वान जारी गरे । ओलीले एमालेलाई २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्नेलगायतका सर्तसहित एकताको आह्वान गरे ।
तर, जेठ २५ मा ओलीको प्रस्ताव जालझेल, भ्रमका आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय प्रेरित रहेको भन्दै वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रूपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई नेपाल समूहले आह्वान गर्‍यो । ठीक त्यही बेला २७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने ओली पक्षको निर्णयलाई अवैध ठहर गरिदियो । त्यसबीचमा पनि ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको थियो । छलफल चलिरहेका बेला ओली पक्ष सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गयो । उक्त निर्णयले दोस्रो तहका नेताहरूबीचको संवाद पनि रोकियो ।
असार १५ मा ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर २०७५ जेठ ३ अघिको पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टी सञ्चालन हुने निर्णय गर्‍यो । त्यसैअनुसार असार १८ मा दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भयो । त्यही बैठकले असार १९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।
त्यसै दिन नेपालपक्षीय नेता रावलले बालुवाटार पुगेर ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि झन्डै डेढ महिनादेखि निष्क्रिय कार्यदल ब्युँताउने सहमति भयो । असार २२ देखि सक्रिय बनेको कार्यदलले लगातारको छलफलपछि असार २७ मा दसबुँदे सहमति गर्‍यो । त्यसै दिन नेता नेपालले उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि जनाए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् फागुन २८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि अध्यक्ष ओली सत्ताच्युत भए । अदालतबाट परमादेश आएकै दिन बसेको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेपालले आफू पार्टीमा एकताको प्रयास भइरहेको भन्दै नयाँ परिस्थितिमा गठबन्धनमा नरहने घोषणा गरे ।
साथै बैठकले कार्यदलले गरेको सहमति अनुमोदन गरेर कार्यदल विघटन गर्‍यो । साउन २ मा दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले ओलीलाई भेटेर दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए । ओलीले आफू सकारात्मक भएको तर नेपाललाई सम्झाउन सुझाव दिएपछि उनीहरूले साउन ३ (आइतबार) बिहान नेपाललाई भेटेका थिए । तर, नेपालले आफ्नो अडान कायम राख्दै देउवाको पक्षमा मतदान गरे ।